Iwe ungadai wakavhura iyi Tsamba ... Martech Zone
Iwe ungadai wakavhura iyi Tsamba…
China, May 15, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi mutsamba yangu ndagamuchira hamvuropu yebhuruu yaive nezita rangu nekero zvakanyatsodhindwa kumberi. Kero yekupindura yaive PO Bhokisi asi ichiri kuoneka yakanyorwa nemaoko. Pandakavhura hamvuropu pamusoro, yaive nechisimbiso cheHallmark. Iyo yekuda kuziva yakandikunda uye ndakaivhura kuti ndiwane kadhi ine inotevera meseji:
Uku kunyora kwemaoko font tekinoroji uye iri kunyatso rova ​​iyo chaipoipo tsamba chiitiko chemakore apfuura. Vanotungamira vatengesi vanoziva kuti kana vakakuita kuti uvhure chidimbu chetsamba, iwe unonyanya kugona kuverenga chidimbu. Kana iwe ukaverenga chidimbu, iwe unokwanisa kwazvo kufona. Kana iwe ukafona, iwe ungangotenga. Izvo zvese zvinotanga neakavhurika, hazvo!
Chikonzero nei iyi font ingatendeke ndeyekuti vanosiyanisa sei saizi yetsamba dzakafanana (tarisa ma 'e ari mukumhanya), uye nzvimbo yekusiyana (ese ari maviri kuchenjera uye Tracking). Maitiro acho zvechokwadi anotora pfungwa dzako, pane zvakakwana musiyano kubva kune wakajairika mhando kuti unyengere iwe uchifunga kuti zvakanyorwa-neruoko.
Imwe nzira iri nyore yekuudza kuti hazvisi izvo ndeyekuti iyo chaiyo mitsara yakanyatsopatsanurwa kubva kune imwe uye yakanyatsorongeka. Pasina mubvunzo hunyengeri uhu hunoshandurwawo mune ramangwana. Chero nzira, chidimbu chakanaka chebasa uye ndine chokwadi chekuti ichashandura tarisiro yakati wandei. Ini handifarire sezvo ndingave ndiri kufamba nekukurumidza.
Tags: kutarisa mepudiscuzzfacebook edgerankgravatarkumhara peji dhizainimultivariate kuyedzakugadzirisa mutauro mutauroPDFpdf manejimendiTom Foremski
May 15, 2008 pa 10: 09 PM
Ingomirira kusvikira vatengi vawana ruzivo kune izvi uye vatange kuifuratira. Nhanho inotevera ichave yemakambani kuburitsa kunyorera vanyori kuIndia. Tsamba yako yakananga ichave yakanyorwa ruoko. Zvinhu zvinouya zvizere denderedzwa. Mirira chete.
May 16, 2008 pa 6: 17 AM
Sezvineiwo zvakakwana, ndinowana mashoma 'akanyorwa' chero chinhu kuburikidza nesnail-mail kuitira kuti kufanotaura kwako kungave kuri kwechokwadi.
Nezve kuburitswa kuIndia - nehupfumi huri kuwedzera uye kudonha kwedhora reAmerica, India iri kudhura zvakanyanya kupfuudza kune - kunyanya sezvo maIndia mazhinji akadzidziswa (kazhinji muUnited States). India yakazviitira zvakanaka pachayo! Handina chokwadi chekuti vangave tarisiro chaiyo yekubuda uku, asi ini handisi kukahadzika imwe nyika ine mari yepasi inogona kuuya patafura nemhando iyoyo yemhinduro.
May 16, 2008 pa 6: 49 AM
Chokwadi, ndanga ndakamirira kwemwedzi mitatu kukokwa kweU-vhesi uye unoiwana pamberi pangu uye haudi. Iko kupi kurongeka mune izvo ?! LOL.
May 16, 2008 pa 7: 17 AM
Mumwe weshamwari dzangu anoshanda paU-vhesi uye akati zvakanangana nekunongedza kwemhuri nekuda kweiyo bandwidth uye chinhambwe kubva kumidziyo yekufambisa. Akandiudza chaizvo muvakidzani wako anogona kuva nazvo asi iwe unogona kunge usina. Ini ndinofunga ivo vari kushanda kuburikidza neyezvivakwa nyaya kune imwe nharaunda kusvika munharaunda nhanho. Ini pamwe ndiri mukati nekuti ini ndinogara mufurati izvozvi - yakakwira density!
May 16, 2008 pa 7: 51 AM
Saka, isu tinowana sei iyo font? Ini ndogona kutofunga nezve dhizaini imwe yandinoda kuishandisa mu…
(Yep, yakajairika graphic dhizaini mhinduro.)
May 16, 2008 pa 10: 39 AM
Dai ndaive murume wekubheja ndaive ne $ 10 kuPhilippines senzvimbo yekunze.
Kukura kunotevera kwaizove kwekutevera zvishandiso zvinogona kushandiswa kuona iyo envelopu ichivhurwa, kana ikavhurwa nemurume kana mukadzi, zera remunhu uye kuti yakareba sei isati yabviswa nemarara.
May 16, 2008 pa 10: 55 AM
Nepo iwe uchichiona sechinhu chinonakidza chekushambadzira, ini ndinochiona sechiva. Matekiniki ekunyengedza vanhu kuti vateerere haasi iwo chete maratidziro andiri kufarira kushandisa. Chokwadi vanogona kuve vanoshanda kwenguva pfupi, asi ini ndoda kuti vanhu vateerere mhando yechiratidzo changu uye zvandiri kupa, kwete nekuti rimwe benzi rakanyura mukufunga kuti ndakavatumira tsamba yakanyorwa. JWTCW.
May 16, 2008 pa 12: 05 PM
Handina chokwadi chekuti ndati chii chaive chiitiko chinonakidza chekushambadzira kana ini handina kuchisimudzira. Ini handibvumirani newe, ini ndanga ndichingo taura nezve tekinoroji - kunyangwe ndichiyemura. Mushure mezvose, ini ndiri benzi rakayamwa.